धमिराले खायो क्यान्सरको औषधि - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
धमिराले खायो क्यान्सरको औषधि
काठमाडौं । औषधि कसले खान्छ ? स्वाभाविक जवाफ हो– बिरामीले । तर भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा भएको रक्त क्यान्सरको औषधि बिरामीले होइन, धमिराले खाएको छ । अमेरिकाको म्याक्स फाउन्डेसनले दिएको ‘ग्लिभिक’ नामक निकै महँगो औषधिका ३६ प्याकेट धमिराले नष्ट गरेको हो ।
अस्पतालबाटै प्राप्त जानकारीअनुसार म्याक्सले ग्लिभिक वर्षमा ४ हजार ५ सय प्याकेट सहयोग गर्छ । त्यसको मूल्य एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबर पर्छ । यसका आधारमा एक प्याकेटको २ लाख ३७ हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ हाराहारी हुन आउँछ । धमिराले नष्ट गरेका ३६ प्याकेटको ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँ पर्छ । म्याक्स फाउन्डेसनले सहयोग गरेका कारण बिरामीले यो नि:शुल्क पाउँदै आएका छन् । उसले सन् २००४ देखि ग्लिभिक, सुटेनजस्ता औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको हो ।
अस्पताल प्रशासनले भने ‘थोरै मात्रामा’ ग्लिभिकमा धमिरा पसेको स्वीकार गरेको छ । ‘त्यस्तै १०–१५ बट्टामा धमिरा पसेको भन्ने बुझिन आएको छ । म काठमाडौंमा भएका कारण थप बुझ्न पाएको छैन,’ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यले टेलिफोनमा भने । गत असोजमा अस्पतालको वार्षिक उत्सवमा आचार्यले वर्षमा सवा अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्लिभिक प्राप्त हुने जानकारी दिएका थिए ।
औषधि तापक्रम र अन्य वातावरण मिलाएर भण्डारण गरिनुपर्छ । ३६ प्याकेट धमिराले नष्ट गरेपछि अस्पतालका चिकित्सकहरू नै प्रश्न गर्छन्– ‘धमिराले नखाएका बाँकी औषधिचाहिँ प्रयोग गर्न मिल्ने गुणस्तरमा होलान् ?’
यस अस्पतालमा हरेक वर्ष क्यान्सर लागेका ५ हजार बिरामीको उपचार हुने गरेको छ । विभिन्न निकायले अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीका लागि फरक–फरक खालका सहयोग दिँदै आएका छन् । ‘हामीले विदेशबाट आउने औषधिको कार्टुन कोठामा राखेर बिरामीलाई दिँदै आएका छौं । वर्षौंदेखि यस्तै गरेको हो । सबैभन्दा तल रहेको एउटा कार्टुनमा यसपटक समस्या देखियो भनेर मलाई जानकारी आएको हो । थप विषय काठमाडौंबाट फर्केपछि नै बुझ्नेछु,’ कार्यकारी निर्देशक आचार्यले भने ।
औषधिको कार्टुनलाई सामान्य तरिकाले भुइँमा नै राखेका कारण चिसोले धमिरा लागेको हो । अझै पनि त्यसैगरी औषधि भुइँमै राखिएका छन् । ग्लिभिक खाने बिरामी ९ सय ८ जना रहेको अस्पतालले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । म्याक्स फाउन्डेसनकी नेपाल प्रतिनिधि श्वेता अग्रवालले औषधि ‘ड्यामेज’ भएको विषयमा आफूले पनि जानकारी पाएको तर थप विवरण टेलिफोनमा दिन नसक्ने बताइन् । धमिराले खाएको ग्लिभिक सेतो प्लास्टिकमा पोको पारेर बिहीबारसम्म अस्पतालको नि:शुल्क औषधि वितरण काउन्टरमै राखिएको थियो । कान्तिपुरबाट